ESI EMEGHE MGBIDI VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Esi emeghe mgbidi VKontakte
Na netwọk mmekọrịta Vkontakte enwere nnukwu ọnụ ọgụgụ nke dị iche iche nke na-enye gị ohere ịhazi ohere na ibe ahụ dabere na mmasị onwe gị. Ọ bụ maka ntọala ndị a, na ịkọwa kpọmkwem banyere ị ga-esi mebie nkwenye ọ bụla na nzuzo, a ga-atụle anyị n'ọdịnihu na isiokwu ahụ.
Mepee mgbidi VKontakte
Ị ga-aghọta na usoro ịmepe mgbidi n'ime netwọk mmekọrịta a metụtara ntọala nzuzo. Nke ahụ bụ, site n'iwepụ ihe ọ bụla na mmachibido ịchọta ozi, ị na-enye ohere maka data a na ndị ọzọ, gụnyere ndị na-amaghị ama, ndị na-eme njem nleta. Ọ bụrụ na ị mejuru afọ ojuju maka ọnọdụ a, gbasoo ndụmọdụ dịka ntuziaka ndị a si dị.
Ọ dịghị mkpa ịgbaso ndụmọdụ nile, ebe ọ bụ na ịchọrọ mmasị gị ka ọtụtụ n'ime ntọala ahụ.
Na-agwụ na nkowa nke isi ihe, ọ dị mkpa ịkọ otu n'ime isiokwu ndị mbụ banyere nkwụsị nke njigide na profaịlụ. Site na ijikọta aro maka mmechi ma mepee mgbidi ahụ, data nkeonwe gị ga-adị mma.
Lee kwa: Otu esi mechie mgbidi VC
Meghee oghere na mgbidi profaịlụ
Ọ bụrụ na anyị na-ekpe ikpe mmalite nke mgbidi onye ọrụ n'ozuzu ya, mgbe ahụ ọbụlagodi onye ọrụ novice ekwesịghị inwe nsogbu na nke a. Ọ na-abịa ná nkwubi okwu na naanị ngalaba ndị ahụ na-edozi mgbanwe dị ukwuu nke onye nwe profaịlụ ahụ dezie n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Iji malite, gbasaa ndepụta nke isi ngalaba nke saịtị ahụ, jiri pịa na avatar gị na akuku elu nke ibe. Site na ndepụta nke ihe, họrọ njikọ "Ntọala".
Ịnọ na taabụ "General" chọta ihe "Ntọala Ntọala".
Chọpụta ihe ahụ "Gbanyụọ posts ịkọ ajụjụ"iji nye ohere inweta ikike ikwu ihe na mgbidi.
Mgbe ịgbanwee gaa na ibe "Nzuzo".
Ọzọ ịkwesịrị ịgbanwe gaa na ọnọdụ "Ndị ọrụ niile" ntuchi "Ònye na-ahụ ihe ndị ọzọ na mgbidi m" ma "Ònye na-ahụ ihe ndị kwuru na"site na ịnweta ohere ịlele ihe ọ bụla na mgbidi, ọ bụrụ ọkwa onye ọzọ maọbụ ikwu okwu.
Iji nye ndị ọzọ ohere ịza ajụjụ ma ọ bụ posts na mgbidi gị, setịpụ otu uru dị n'akụkụ akara. "Ònye nwere ike biputere na peeji nke" ma "Ònye nwere ike ikwu okwu banyere m".
Ọ bụrụ na ị bu n'obi inye oke ohere nnwere onwe maka ọrụ ndị ọzọ na adreesị nke mgbidi gị, na-abụghị ihe "Ònye ga-ahụ peeji m na Intanet?" jide n'aka na ị ga-arụnye "Nye mmadụ niile".
Echefukwala ilele otú etinyere mgbidi ahụ mgbe ọ na-eme mgbanwe ndị akọwapụtara site na iji njikọ ahụ "Lelee otú ndị ọrụ ndị ọzọ si ele ibe gị".
Mgbe echichi ahụ zuru oke, ịchekwa adịghị achọrọ.
N'ihi manipulation, onye ọ bụla, ọbụna na-enweghị akaụntụ VK, ga-enwe ike ịga na profaịlụ gị. Ndị ọrụ ahụ nwere akwụkwọ nke aka ha ga-emecha nweta nnwere onwe ime ihe.
Hụkwa: Otu esi ezobe ibe VK
Ihe anyị gwara, ọ bụ ezie na ọ bụ ụzọ bụ isi isi meghee ihu ọha na mgbidi, a ka nwere nuances ole na ole. Akụkụ ndị a nke afọ ndị ahụ metụtara ihe ndekọ ahụ n'onwe ha, nke ị ga-ebipụta na ndepụta gị.
Hụkwa: Otu esi tinye na mgbidi VK
Gbanwee na profaịlụ gị site na iji ngalaba "My Page" na nchịkọta nhọrọ nke saịtị ahụ.
Mepee ụdị "Gịnị ka ọ dị ọhụrụ n'ebe ị nọ?".
Tupu ịdee post na-esote bọtịnụ ahụ "Zipu" wepu mkpọchi "Naanị ndị enyi".
Ị gaghị enwe ike idezi posts bipụtara na mbụ, na-eme ha n'ihu ọha.
Mgbe ị kwụsịrị na njedebe ikpeazụ, akwụkwọ nkeonwe gị bụ kpamkpam maka ndị ọbịa ọ bụla. N'okwu a, n'ezie, isi nchịkwa ka nke gị, ebe ọ bụ na onye nwe akaụntụ ahụ nwere ike ịkwụsị onye, ​​dịka ọmụmaatụ, iji ndepụta listi.
Hụkwa: Otu esi tinye ndị mmadu na listi ojii
Mepee ohere maka mgbidi nke otu
Site n'iji ya tụnyere mgbidi nke profaịlụ onwe onye, ​​enwere usoro nzuzo nzuzo, ma na n'ime obodo. Ọzọkwa, n'adịghị ka nkeonwe nkeonwe, n'otu ìgwè, ohere nke ajụjụ nwere ike ịgbanwe ọ bụghị naanị site n'aka onye okike ọha na eze, kamakwa site n'aka ndị nwere ihe ùgwù pụrụ iche.
Hụkwa: Otu esi tinye onye nchịkwa na obodo VK
Dị ka akụkụ nke ntuziaka a, anyị ga-ele anya na ịmepe mgbidi otu maka onye na-emepụta ọha na eze, nke ga-esi na ya pụta ịchọta ụfọdụ ọdịiche na omume. Ọ bụrụ na ịnwe ọnọdụ a kapịrị ọnụ, ma zute nsogbu, jiri ụdị akwụkwọ ahụ mee ka ị ghọta nuances nke nsogbu.
Mepee menu isi nke ọha na eze site na iji bọtịnụ ahụ "… ".
Gaa na ngalaba "Nchịkwa Obodo".
Agbanwela taabụ "Ntọala", chọta ngọngọ na ibe "Ozi Nhazi".
Lee na akara "Ụdị Otu" mkpa ka ị gbanwee nsụgharị obodo ahụ "Meghee"nke mere na ndị ọrụ niile nwere ike ile mgbidi na-enweghị ọdịiche.
Hụkwa: Otu esi emepụta ìgwè mechiri emechi VK
Tinye ntinye na iji igodo "Chekwa".
Ọzọ, gaa na taabụ ọzọ. "Ngalaba".
Na-esote ihe ọ bụla e nyere, karịsịa maka akara "Mgbidi", ịkwesịrị ịtọ ntọala "Meghee" ma ọ bụ "Mmachibidoro".
N'ihi nke a, ndị ọrụ ga-enwe ike igbochi ọrụ nke ụfọdụ ihe mgbidi ahụ ma ọ bụ hụ ha.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike wepụ ihe ụfọdụ na mgbidi, wepụ ihe nrụnye ahụ "Gbanyụọ".
Zọpụta ọnụọgụ abụọ site na iji bọtịnụ pụrụ iche.
N'elu eziokwu ahụ na ndụmọdụ ndị anyị kọwara na-emezi n'ụzọ ziri ezi, a ga-emeghe mgbidi nke obodo ahụ, na-enye ohere dịgasị iche iche maka ndị si mba ọzọ.
Na nke a na nkebi a, dị ka isiokwu a, anyị na-agwụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, jide n'aka ịkọwa ajụjụ gị site na ikwu.